မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး၊ အော်တိုကေဘယ်လ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ OEM၊ မော်တော်ကားဝါယာကြိုးကြိုး၊
အဓိကစျေးကွက်များ: Americas , Europe , North Europe , Worldwide , Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East , Oceania , Other Markets , West Europe
ဖေါ်ပြချက်:မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး,အော်တိုကေဘယ်လ်အသင်းတော်များ,OEM Automotive ဝါယာကြိုးကြိုး,လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး,ဝါယာကြိုးကြိုး,အော်တိုဝါယာကြိုးကြိုး
စိတ်ကြိုက် Cable ကိုညီလာခံ
စိတ်ကြိုက် Cable ကိုညီလာခံ
မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး (Total 75 Products)
မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး, အော်တိုကေဘယ်လ်အသင်းတော်များ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, OEM Automotive ဝါယာကြိုးကြိုး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
car ECU ဝါယာကြိုးကြိုးနှင့် ampseal connector ကို cable ကိုပရိသ
ampseal မော်တော်ယာဉ်ချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုးကြိုးနှင့် 770680-1 connector ကို cable ကို assemly
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောဝါယာကြိုးကြိုး Automotive Relay ပြောင်းခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သော 30 amp 12V ဝါယာကြိုးကြိုး
Automotive Relay Switch-30 သည်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် 30 amp 12V ဝါယာကြိုးကြိုး
Custom Metri-Pack 280 တံဆိပ်ခတ်ထားသောအမျိုးသမီး Connector Assembly ကိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်
Snow Trailer Headlamp အတွက်ဝါယာကြိုးညီလာခံ
မော်တော်ကားများအတွက် switch သည်ဝါယာကြိုးကြိုး IQ- ​​အမြင်
MCP connectors နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်အလိုအလျောက်ဝါယာကြိုးညီလာခံ
မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်ထားသော system ကိုများအတွက် cable ကိုအသင်းတော်များ
တိုယိုတာနှင့် Nissan ကားဝါယာကြိုး
Bosch ECU GS4 HAVAL H5H6 အတွက်ကေဘယ်ကြိုးများ
Mizu-P25 ရေစိုခံ connector ကိုတပ်ဆင်
IQ-view မရှိ switch နှင့်အတူရှုပ်ထွေးဝါယာကြိုးစည်းဝေးပွဲကို
ရေစိုခံဖျူးကိုင်ဆောင်သူ connector ကို
ထုံးစံမော်တော်ယာဉ် cable ကိုအသင်းတော်များ
မော်တော်ယာဉ်ဖိအား switch ကိုစနစ်အဘို့အဝါယာကြိုးပရိသ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10 / Piece/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: 30K~50K/M
car ECU ဝါယာကြိုးကြိုးနှင့် ampseal connector ကို cable ကိုပရိသ အော်တို ECU ဝါယာကြိုးညီလာခံ ECU စနစ်အတွက်အသုံးပြုသည် CAR AUDIO ဝါယာကြိုးအရိပ် CAR Speaker စကားပြောခြင်း CAR STEREO CABLE...
ကားစတီရီယိုဝါယာကြိုးကြိုးနှင့်အသံကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း အော်တို ဝါယာကြိုးညီလာခံ အသံနှင့်စတီရီယိုစနစ်အတွက်လျှောက်ထားသည် CAR AUDIO ဝါယာကြိုးအရိပ် CAR Speaker စကားပြောခြင်း CAR STEREO CABLE ပွဲ သင်၏လုပ်ငန်းနှင့်မော်ဒယ်နှင့် လိုက်ဖက်...
ampseal မော်တော်ယာဉ်ချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုးကြိုးနှင့် 770680-1 connector ကို cable ကို assemly ဝါယာကြိုးကြိုးစိတ်ကြိုက် ဒီ ampseal မော်တော်ယာဉ် plug ကို ASSEMBLIES အမျိုးအစားများသည်အော်တို Powertrain စနစ်များ၊ လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးစနစ်များ၊ (သို့)...
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောဝါယာကြိုးကြိုး Automotive Relay ပြောင်းခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သော 30 amp 12V ဝါယာကြိုးကြိုး Automotive Relay Switch-30 သည်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် 30 amp 12V ဝါယာကြိုးကြိုး အော်တို တံဆိပ်ခတ် Relay ဝါယာကြိုးညီလာခံ အမှန်တကယ်နှင့်...
Automotive Relay Switch-30 သည်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် 30 amp 12V ဝါယာကြိုးကြိုး Automotive Relay Switch-30 သည်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် 30 amp 12V ဝါယာကြိုးကြိုး အော်တို တံဆိပ်ခတ် Relay ဝါယာကြိုးညီလာခံ အမှန်တကယ်နှင့် switch ကိုစနစ်အတွက်လျှောက်ထားသည် CAR...
Custom Metri-Pack 280 တံဆိပ်ခတ်ထားသောအမျိုးသမီး Connector Assembly ကိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည် Custom Metri-Pack 280 တံဆိပ်ခတ်ထားသောအမျိုးသမီး Connector Assembly ကိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည် Metri-Pack ကို 280 တံဆိပ်ခတ် connectors...
Supply နိုင်ခြင်း: 5K~10K/M
Truck ကားရှေ့မီးများအတွက်ဝါယာကြိုးညီလာခံ GROTE US အတွက်စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်ထားသောထရပ်ကားရှေ့မီးလုံးအတွက်ဤ ဝါယာကြိုး တပ်ဆင်ခြင်း။ ly ဤ မော်တော်ကားဝါယာကြိုး ဖောက်သည်လိုအပ်အကြောင်းအရာအဖြစ်မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။...
Caravan ဝါယာကြိုးအသင်းတော်များ ကားကိုဆွဲဆောင်ရန်အသုံးပြုသောဤ အဓိကဝါယာကြိုးတပ်ဆင်မှု ။ ရက်ကန်းစင်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးရှည်လျားလွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားကျစ်ကျစ်လစ်စကုပ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသောပုံစံကိုအစားထိုးရန်၊...
Supply နိုင်ခြင်း: 50K~100K/M
မော်တော်ကားများအတွက် switch သည်ဝါယာကြိုးကြိုး IQ- ​​အမြင် ရှုပ်ထွေးသောကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင် မှုသည်မော်တော်ကား IQ-view no switch system အတွက်ဆင်းသက်လာသည်။ မူရင်း DEUTCH မှအစိတ်အပိုင်းအားလုံး၊ littlle fuse box ။ Cable...
MCP connectors နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်အလိုအလျောက်ဝါယာကြိုးညီလာခံ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများစုသည်အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ ဆွီဒင်စသည်တို့မှ OEMs သို့မဟုတ် ODMs များဖြစ်သည်။ Etop တွင်အထူးနမူနာနမူနာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိသည်။ SR, connector,...
မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်ထားသော system ကိုသည် Cable ကိုအသင်းတော်များ ဤသည် အလိုအလျောက်ကေဘယ်ကြိုးကြိုး မော်တော်ယာဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Type connector သည်ရေစိုခံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတံဆိပ်ပါသောတံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အကာအကွယ်ပြုရန်သွပ်...
GPS စနစ်အတွက်အသုံးပြုဝါယာကြိုးအသင်းတော်များ။ ဒီ လျှပ်စစ် ဂျီပီအက်စ်အတွက်အသုံးပြု wi r ကို အီးအသင်းတော်များ ။ အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုနှစ် (၁၀)...
တိုယိုတာနှင့် Nissan ကားဝါယာကြိုး connector နှင့် terminal အစိတ်အပိုင်းများသည်မူလ Japan YAZAKI နှင့် SUMITOMO မှဖြစ်ပြီး Hulane မှအချို့သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ရက်ကန်းစင်သစ်ကို PVC ပြွန်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီး 3M တိပ်ဖြင့်ပိတ်ထားသည်။ မော်တော်ယာဉ်...
Supply နိုင်ခြင်း: 1K~2K/M
Bosch ECU GS4 HAVAL H5H6 အတွက်ကေဘယ်ကြိုးများ Bosch အတွက်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသော အော်တိုကေဘယ်ကြိုး သည်အလိုအလျောက် ECU စနစ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤသည် စိတ်ကြိုက်ဝါယာကြိုးစည်းဝေးပွဲ ကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အားဖြင့်အားလုံးဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းများ၌။...
Supply နိုင်ခြင်း: 500K~1000K/M
Mizu-P25 ရေစိုခံ connector ကိုတပ်ဆင် Mizu-P25 ဝါယာကြိုး -to- ဝါယာကြိုး connector ကိုစနစ်သည် IP67 အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိသောစျေးကွက်ထဲတွင်ပထမဆုံးသောသေးငယ်သောတံဆိပ်ခတ်စနစ်ဖြစ်သည်။...
relay နှင့်အတူရှုပ်ထွေးအော်တိုဝါယာကြိုးပရိသ ဤသည် အလိုအလျောက်မော်တော်ယာဉ် relay ကေဘယ်ကြိုး များကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ခွဲထားသောမြှောင်းပုံပြွန် များ ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ထပ်ဆင့်လွှင့်သူများ နှင့် socket များစွာပါ ၀ င်သည်။ သက်ဆိုင်သော auto wajers များကို...
IQ-view မရှိ switch နှင့်အတူရှုပ်ထွေးဝါယာကြိုးစည်းဝေးပွဲကို ရှုပ်ထွေးသောမော်တော်ကားဆိုင်ရာကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင် မှုသည်မော်တော်ကား IQ-view no switch system အတွက်ဆင်းသက်လာသည်။ မူရင်း DEUTCH မှအစိတ်အပိုင်းအားလုံး၊ littlle fuse box ။ Cable...
Supply နိုင်ခြင်း: 3K~5K/M
မော်တော်ဘုတ်များအတွက်ရှုပ်ထွေးဝါယာကြိုးစည်းဝေးပွဲကို မော်တော်ဘုတ်စနစ်အတွက်အသုံးပြုသည်ဤ ထုံးစံရှုပ်ထွေးဝါယာကြိုးအသင်းတော်များ ။ ကုန်ကြမ်းအားလုံးသည် Cinch, ITT, DEUTSCH, TYCO မှဖြစ်သည်။ အဆိုပါ cable ကိုအသင်းတော်များ လောင်စာစာနယ်ဇင်း,...
ရေစိုခံဖျူးကိုင်ဆောင်သူ connector ကို ဤသည် 2pin အလိုအလျောက်ရေစိုခံဖျူး plug , ဒေသခံလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ဖျူးကိုင်ဆောင်သူ ကြီးမားသော amp ဖျူးကိုင်ထား နိုင်သည်အခြားတစ်ဖက်ချောင် insulator တွင်လည်း 250 terminal ကိုနှင့်အတူ crimped ။...
ထုံးစံမော်တော်ယာဉ် cable ကိုအသင်းတော်များ ETOP မှ အလိုအလျောက်ကေဘယ်ကြိုး တပ်ဆင်ခြင်းသည်အရည်အသွေးနှင့်မြန်နှုန်းတပ်ဆင်ခြင်းကိုတိုးတက်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုံးစံကေဘယ်ကြိုး...
မော်တော်ယာဉ်ဖိအား switch ကိုစနစ်အဘို့အဝါယာကြိုးပရိသ ဒါ ထုံးစံ wi အသင်းတော်များ FAN, RELAY အစိတ်အပိုင်းများသို့မော်တော်ယာဉ်ဖိအား switch switch ကိုစနစ်အတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဘုံ splice PNT terminal ကိုအစားထိုးသောဝါယာကြိုးပူးတွဲဆက်သွယ်မှုများအတွက်အထူး...
တရုတ်နိုင်ငံ မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး ပေးသွင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝါယာကြိုးကြိုး အမျိုးမျိုးကိုမော်တော်ကားနှင့်ထရပ်ကားအမျိုးမျိုးအတွက်အင်ဂျင်အဆို့ရှင်အဖုံး gasket / ဒီဇယ် gasket (DORMAN-FORD), headlamp (GROTE), Intelligent Anti-collision System (Mobileye)၊ အသံ၊ နောက်ဘက်မှန်၊ စသည်တို့ကိုလည်း လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အဘို့အ ပြီးပြည့်စုံအင်ဂျင် cable ကိုစုဝေး ။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ: ul wiring assembly , engine gasket cable, cable ကြိုး။
APEX 2.8MM connector ကိုနှင့်အတူထုံးစံထရပ်ကားအဖြေရှာတဲ့ J1962 OBD2 coverter cable ကို
Heavy Truck Diagnostic Cable အမျိုးသမီး OBD2 အမျိုးသမီး J1708 ကော်နက်ရှင်
ပုံသွင်း Molex 43025 တစ် ဦး မှ J1939M အမျိုးအစား II ကို
အရောင် powerpole connectors
Molex တံဆိပ်ခတ် Connector နှင့်အတူ OEM ဝါယာကြိုးကြိုး Assy
အလွန်မြင့်မားသော superseal 1.5 ရေစိုခံ connectors
DTV02-18 connector များနှင့်အတူထုံးစံဒီဇယ်အင်ဂျင်လောင်စာဝါယာကြိုးကြိုး
ebikes များအတွက် mini ကိုရေစိုခံ connectors
M6 mini 5pin ရေစိုခံပလပ်
ထုံးစံမော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုးနှင့် cable ကိုအသင်းတော်များ
ထုံးစံရေစိုခံ M8 အာရုံခံ cable ကို splitter Y ကိုအမျိုးအစား
မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး အော်တိုကေဘယ်လ်အသင်းတော်များ OEM Automotive ဝါယာကြိုးကြိုး လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး ဝါယာကြိုးကြိုး အော်တိုဝါယာကြိုးကြိုး Ampseal မော်တော်ယာဉ်ဝါယာကြိုးကြိုး မော်တော်ယာဉ် Deutsch ဝါယာကြိုးကြိုး
လိပ်စာ: 2108, Dongguan Port, Shatian Town, Dongguan, Guangdong
မူပိုင်ခွင့်© 2021 ETOP WIREHARNESS LIMITED All rights reserved ။